Yohane 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 12:1-50
Maria hwiee ngo guu Yesu nan ho (1-11)
Yesu de nkonimdi kowuraa Yerusalem (12-19)
Yesu kaa ne wu ho asɛm (20-37)
Gyidi a Yudafo annya no maa nkɔmhyɛ bi baa mu (38-43)
Yesu begyee wiase nkwa (44-50)
12 Bere a aka nnansia ama Twam no adu no, Yesu baa Betania; ɛhɔ na na Lasaro+ a Yesu nyan no fii awufo mu no te. 2 Enti wɔyɛɛ anwummere aduan maa no wɔ hɔ, na na Marta resom wɔn.+ Lasaro de, na ɔka wɔn a wɔne no redidi no ho.* 3 Ɛnna Maria faa ngo huamhuam a ne bo yɛ den paa, nardo ngo huamhuam papa bi, bɛyɛ toa baako.* Na ohwie guu Yesu nan ho, na ɔde ne ti nwi popae. Na ngo huamhuam+ no gyee ofie hɔ nyinaa. 4 Nanso Yuda Iskariot+ a na ɔyɛ asuafo no mu baako, a na ɔrebeyi no ama no kae sɛ: 5 “Adɛn nti na wɔantɔn ngo huamhuam yi annye denare* 300 amfa amma ahiafo?” 6 Ɛnyɛ sɛ na odwen ahiafo ho nti na ɔkaa saa, mmom na ɔyɛ ɔkorɔmfo. Ná sika adaka no wɔ ne nkyɛn, na na ɔtaa wiawia sika a wɔde gu mu no bi. 7 Ɛnna Yesu kae sɛ: “Munnyaa no mma ɔnyɛ amanne yi mma da a wobesie me.+ 8 Ahiafo de, wɔwɔ mo nkyɛn daa,+ na me de, ɛnyɛ daa na mɛwɔ mo nkyɛn.”+ 9 Na nnipadɔm bi a wɔyɛ Yudafo hui sɛ Yesu wɔ hɔ, na wɔbaa hɔ. Ɛnyɛ Yesu nko ara nti na wɔbaa hɔ, na mmom wɔbɛhwɛɛ Lasaro a onyan no fii awufo mu+ no nso. 10 Afei asɔfo mpanyin no bɔɔ pɔw sɛ wobekum Lasaro nso, 11 efisɛ ɔno nti, Yudafo bebree kɔɔ hɔ, na wogyee Yesu dii.+ 12 Ɛda a edi hɔ no, nnipadɔm kɛse a wɔbaa afahyɛ no ase no tee sɛ Yesu reba Yerusalem. 13 Enti wɔfaa berɛw, na wopue kohyiaa no. Ɛnna wofii ase teɛteɛɛm sɛ: “Yɛsrɛ wo gye no! Nhyira ne nea ɔba wɔ Yehowa* din mu!+ Nhyira ne Israel Hene+ no!” 14 Na Yesu huu afurum ba bi, na ɔtenaa no so,+ sɛnea wɔakyerɛw sɛ: 15 “Sion babea, nsuro. Hwɛ! Wo hene reba; ɔte afurum ba so.”+ 16 Mfiase no, n’asuafo no ante eyinom ase. Nanso bere a wɔhyɛɛ Yesu anuonyam+ no, wɔkaee sɛ, na wɔakyerɛw eyinom afa ne ho, na wɔyɛ maa no.+ 17 Na nnipadɔm a na wɔka ne ho bere a ɔfrɛɛ Lasaro fii ɔda+ no mu na onyan no fii awufo mu no kɔɔ so dii adanse.+ 18 Ɛno nso nti na nnipadɔm no kohyiaa Yesu no, efisɛ na wɔate sɛ wayɛ saa sɛnkyerɛnne yi. 19 Ɛnna Farisifo no kekae sɛ: “Moahu? Morentumi nyɛ ho hwee. Hwɛ! Wiase nyinaa atu adi n’akyi.”+ 20 Yɛreka yi, nnipa a na wɔaba sɛ wɔrebɛsom wɔ afahyɛ no ase no, na Greecefo bi ka ho. 21 Saa Greecefo yi baa Filipo+ nkyɛn, Filipo a na ofi Betsaida a ɛwɔ Galilea no, na wofii ase srɛɛ no sɛ: “Owura, yɛpɛ sɛ yehu Yesu.” 22 Filipo kɔka kyerɛɛ Andrea, na Andrea ne Filipo kɔka kyerɛɛ Yesu. 23 Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere no aso sɛ wɔhyɛ onipa Ba no anuonyam.+ 24 Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, sɛ hwiit* aba baako antɔ fam anwu a, ɛda so ara yɛ baako; na sɛ ewu+ a, ɛsow aba pii. 25 Obiara a ɔpɛ ne nkwa* no, ɔsɛe no, na nea ɔtan ne nkwa*+ wɔ wiase yi mu no, ɔbɛbɔ ho ban de akɔ daa nkwa+ mu. 26 Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, ma onni m’akyi. Na baabi a mewɔ no, ɛhɔ na me somfo nso bɛba.+ Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, Agya no bedi no ni. 27 Seesei me ho yeraw me,*+ na dɛn na menka? Agya, gye me fi saa bere* yi mu.+ Nanso eyi nti na maba bere* yi mu. 28 Agya, hyɛ wo din anuonyam.” Ɛnna nne+ bi fi soro bae sɛ: “Mahyɛ no anuonyam, na mɛsan ahyɛ no anuonyam bio.”+ 29 Nnipadɔm a wogyina hɔ no tee, na wofii ase kae sɛ aprannaa abom. Ebinom nso kae sɛ: “Ɔbɔfo akasa akyerɛ no.” 30 Yesu kae sɛ: “Ɛnyɛ me nti na nne yi bae, na mmom mo ntia. 31 Seesei wɔrebu wiase yi atɛn; seesei wɔrebeyi nea odi wiase yi so+ no afi hɔ.+ 32 Na me de, sɛ wɔma me so fi asaase so+ a, mɛtwe nnipa ahorow nyinaa bi aba me nkyɛn.” 33 Ɔkaa eyi de kyerɛɛ owu ko a na ɔrebewu.+ 34 Enti nnipadɔm no ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛte fii Mmara no mu sɛ Kristo no wɔ hɔ daa.+ Adɛn nti na woreka sɛ ɛsɛ sɛ wɔma onipa Ba no so?+ Onipa Ba bɛn na woreka ne ho asɛm yi?” 35 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hann no bɛtena mo mu kakra. Bere a mowɔ hann yi, monnantew, na esum anni mo so; obiara a ɔnam sum mu no nnim baabi a ɔrekɔ.+ 36 Bere a mowɔ hann yi, munnye hann no nni, na moayɛ hann no mma.”+ Bere a Yesu kaa eyinom no, ofii hɔ kɔe, na ɔde ne ho siee wɔn. 37 Ɛwom sɛ na wayɛ nsɛnkyerɛnne bebree wɔ wɔn anim, nanso na wonnye no nni. 38 Ɛmaa asɛm a odiyifo Yesaia kae no baa mu. Ɔkae sɛ: “Yehowa,* hena na wagye nea wate afi yɛn nkyɛn no adi?+ Na hena na wɔayi Yehowa* basa akyerɛ no?”+ 39 Yesaia san kaa nea enti a wɔantumi annye anni no. Ɔkae sɛ: 40 “Wafura wɔn ani, na wama wɔn koma ayɛ den, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa wɔn ani nhu, na wɔremfa wɔn koma nte ase, na wɔansakra amma mansa wɔn yare.”+ 41 Yesaia kaa eyinom efisɛ ohuu Kristo no anuonyam, na ɔkaa ne ho asɛm.+ 42 Eyi nyinaa akyi no, nnipa pii, a sodifo mpo ka ho, gyee no dii,+ nanso Farisifo no nti, wɔampae mu anka, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrentu wɔn mfi hyiadan no mu;+ 43 efisɛ na wɔpɛ nnipa anuonyam mmom sen Onyankopɔn anuonyam.+ 44 Na Yesu maa ne nne so kae sɛ: “Obiara a ogye me di no, ɛnyɛ me nko na ogye me di, na mmom ogye nea ɔsomaa me no nso di;+ 45 na obiara a ohu me no, ohu Nea ɔsomaa me no nso.+ 46 Maba sɛ hann wɔ wiase,+ na obiara a ogye me di no antena sum mu.+ 47 Sɛ obi te me nsɛm na wanni so a, mimmu no atɛn; efisɛ mamma sɛ merebebu wiase atɛn, na mmom mebae sɛ merebegye wiase nkwa.+ 48 Obiara a ommu me, na onni m’asɛm so no wɔ obi a obebu no atɛn. Asɛm a maka no, ɛno na ebebu no atɛn ɛda a edi akyiri no. 49 Efisɛ ɛnyɛ me ara na mede me pɛ kasae, na mmom Agya a ɔsomaa me no, ɔno ara na wakyerɛ me nea menka ne nea menkyerɛkyerɛ.*+ 50 Afei nso, minim sɛ nea wakyerɛ me* no ma daa nkwa.+ Enti nea meka biara, ɛyɛ nea Agya no aka akyerɛ me sɛ menka no ara.”+
^ Anaa “na ɔka wɔn a wɔne no te adidipon ho no ho.”
^ Nt., “nkaribo baako.” Kyerɛ sɛ, Romafo nkaribo baako, bɛyɛ gram 327. Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “me kra ho yeraw no.”
^ Nt., “ɔno ara na wama me nea menka ne nea menkyerɛkyerɛ no ho ahyɛde.”
^ Nt., “n’ahyɛde.”